Va Trump Vanodomwa Zviri Pamutemo Kumirira Bato reRepublican Party Musarudzo yeMutungamiri weAmerica Muna Mbudzi
VaDonald Trump vari pamusangano webato ravo
Bato riri kutonga muAmerica, reRepublican Party, rakatanga neMvhuro musangano waro mukuru weRepublican National Convention mudunhu reNorth Carolina.
Musangano uyu wadoma zviri pamutemo mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, kuti vamirire bato ravo musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino.
VaTrump vachange vachitaura mazuva ese kusvika panopera musangano uyu nemusi weChina.
Mumashoko avo ekutanga, VaTrump vatsoropodza masangano enhau eCNN, Fox News, pamwe chete ne MSNBC vachiti masangano enhau aya haasi kubudisa zviri kuitwa pamusangano uyu sezvaakaita pamusangano we Democtratic National Convention, svondo rapfuura.
VaTrump vachange vachizokwikwidzana naVaJoe Biden vebato reDemocratic Party, iro rakapedza musangano waro wekudoma VaBiden zviri pamutemo svondo rapfuura.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaPromise Sande, vanoti vanhu vazhinji vakamirira kunzwa zvichataurwa naVaTrump kana zviri zvekubatanidza vanhu, sezvo vachigaronyomba vanhu vanovapikisa vebato reDemocratic Party.